U Wira Thu VS other good monks and monk authorities | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြန်မာ့ ဂုဏ်သိက္ခာတံခါး ကျိုးပေါက်ခြင်း (ကဗျာ)
Muslim acceptance in Laos stark contrast to Myanmar intolerance »
This entry was posted on September 2, 2012 at 12:47 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
18 Responses to “U Wira Thu VS other good monks and monk authorities”
September 2, 2012 at 1:14 pm | Reply
My friend Dr. Maung Zarni commented on my FB posting of this album:::Disgusting. Masoeyein was always on the side of the oppressed. now this monk is destroying ths progressive legacy withaone-stroke of hate campaign. i would not be surprised if he is working with Naypyidaw’s agents.
September 2, 2012 at 1:25 pm | Reply
မန္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်းနာယက ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ- ဘွဲ့ခံ ဝီရသူ (မစိုးရိမ်) ဟာ သမ္မတ ထောက်ခံပွဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးကို သုံးပြီး မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ရေး လှုံ့ ဆော်ပွဲကို ၂၀၁၂
စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ တရားဝင်ဦးဆောင်ကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ခေါင်းစီးက ရိုဟင်ဂျာများကို ဒုက္ခသည်စခန်းများကို ပို့၊ တတိယနိုင်ငံများသို့ မောင်းထုတ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးပါ။ ဒါဟာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံး ယူအင် ကိုယ်စားလှယ်ကို ပြောခဲ့တဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးကို ဦးသိန်းစိန်ပြောမိလိုက်လို့- ဦးသိန်းစိန် ကို ရိုဟင်ဂျာ မျိုးပြုတ်သတ်ဖြတ်မှုကို ဦးဆောင်သူ၊ သို့မဟုတ် သမ္မတကိုယ်တိုင်က အားပေးအား မြှောက် ပြုသူ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး- ကမ္ဘာက သူ့ကို မျိုးပြုတ်သတ်ဖြတ်မှု တရားခံအဖြစ် ခုံရုံးကို တင်တော့မယ့် အချိန်မှာ- သူရိပ်မိသွားပြီး မသိမသာ နောက်ဆုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ (Edited from U Htay Lwin Oo’s article.(Future tense changed into ကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
Gov should clarify about this as Hmuu Zaw is also trying to confuse this new stance of the President. Or President is speakingaDOUBLE TALK?
[Double-talk isaform of speech in which inappropriate, invented or nonsense words are used to give the appearance of erudition and so confuse or amuse the audience. Durwood Fincher has madeacareer of perfecting the art of double-talk, giving interviews on national TV programs and writingabiography of his experiences, calling himself “Mr. Doubletalk”.] youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2L2-QRCs5s0
September 2, 2012 at 1:28 pm | Reply
U Aung Tin said>>> သမ္မတကြီးက ဘင်္ဂါလီအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပထမက တတိယနိုင်ငံပို့မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်တွေနှင့် အတူသဟဇာတဖြစ်အောင်နေဖို့နှင့် သူတို့လူနေမှုဘဝ မြှင့်တင်ဖို့ဆိုပြီး ပြင်ပြောခဲ့တယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရဆို နောက်မှ ပြောတာကို ပြင်ဆင်ချက်အဖြစ် အတည်ယူရမှာသာဖြစ်တယ်။ သမ္မတကြီးကို တစ်ကယ်ထောက်ခံသူများဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဘင်္ဂါလီတွေကို မောင်းထုတ်ပါလို့ ပြောလို့မရဘူး။ ပြောရင် သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံတာ မဟုတ်။ ကန့်ကွက်တာသာ ဖြစ်သွားမယ်
September 2, 2012 at 1:39 pm | Reply
JUST READ THIS>>>A Turkish, Cem Ozturk (Journalist with PhD) had already written about him in detail in “Myanmar’s Muslim sideshow” in Asia Times Online on Oct 21, 2003 THAT WIRATHU is an MI Gov agent!!!….TURKEY gov had already knew about all atrocities…. Be careful, if commit sins again….you all will lost your country in UN led Bosnia style invasion to save the Ethnic minorities, Kachin, Chin, Karen, Mon, Shan AND Minority religions:Christians and Muslims…Wirathu U had committedalot of crimes. And your FB is part of the proof of your attack on Christians and Muslims. We are WARNING YOU not to play fool with the Muslims, International Community and esp TURKEY…http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/EJ21Ae01.html
September 2, 2012 at 1:40 pm | Reply
My friend Mg Thit Sar wrote:
မန္တလေးမြို့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအား ထောက်ခံပွဲ ပြုလုပ်ရခြင်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ဆန့်ကျင်လို၍ မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြသည့်အနေဖြင့် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှ ဆရာတော်ဝီရသူက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျ
ားအား ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။
စက်တင်ဘာ (၂)ရက်နေ့နှင့် (၃)ရက်နေ့များတွင် အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်နှင့် ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ် များတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအားထောက်ခံသည့် စီတန်းလမ်းလျှောက်ခွင့်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း မြို့ခံများထံက သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်တွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသည့် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ရိုဟင်ဂျာအယောင်ဆောင်ထားသော အကြမ်းဖက်သည့် ဘင်္ဂလီများကို ဆန့်ကျင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်မှ မိန့်ကြားသည်။
“အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက ဒီဆန့်ကျင်ပွဲမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာမယ်ဆိုရင် ဦးဇင်းက သူတို့ကို လက်ကမ်းကြိုပြီး နေရာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးကိုလည်း ဦးဇင်းအာမခံတယ်၊ အခြားဘာသာဝင်တွေကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ´´ ဟု ဆရာတော်မှ မိန့်ကြားသည်။
အထက်ပါဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တပည့်တော်တို့ လည်း ပူပေါင်းပါဝင်ချင်ပါတယ် ဦဇင်း ဒါပေမဲ့ မသေချာတဲ့ ရပ်တည်မှုအပေါမှာတော့ ဆန်ကျင်မှုတွေ ကိုယ်တပည့်တော်တို့ မလုပ်ချင်ပါဘူးဦဇင် ဘာသာတူလိုလည်းမဟုတ်ပါဦဇင်း၊ တပည့်တော်တို့ ကိုယ် ရိုဟင်ဂျာ ဆန့်ကျင်ရေးမှာ တကယ်ပါဝင်စေချင်ရင် ရိုဟင်ဂျာသည် တိုင်းတပါးမှ ခိုးဝင်လာသည်ကို
ယ် နိုင်ငံတော်က တကမ္ဘာလုံးလက်ခံနိုင်အောင် တိတိ ကျကျဖေါ်ထုပ်နိုင်တဲ့ တနေ့ ဒီတာဝန်တွေကိုယ် ဦးဇင်တို့ ကိုယ်စာ တပည့်တော်တို ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူပြီးဆန်ကျင်မောင်ထုပ်ပါ့မယ်။
ဦဇင်းရဲ့ ဖိတ်ခေါ်မှုမှာ ပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ နေရာပေးမယ်ဆိုတာတော့ ထားလိုက်ပါတော့ ဦဇင်…ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုယ် လုံခြုံရေးကိုယ်ဦဇင်းကအာမခံမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ အာမခံမှာလည်ဦဇင်း…ဦးဇင်းကကော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်အုပ်ချုပ်တဲ့ နေရာမှာ ဘယ်လိုနေရာက ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေလည်းဆိုတာ အရင်ဆုံးသိပါစေ..
ဦဇင်…ယခုလေားလောဆယ်တော့ ဒီအရေးအတွက် တပည့်တော်တို့ နာစေးနေပါတယ် ဦဇင်….
.သေချာတဲ့ စကားတခွန်းဦဇင်းအားလျှောက် တင်ချင်ပါတယ်..မြန်မာမွတ်ဆလင်များသည်ဘယ်တော့မှ အမျိုးသားရေးကိုယ် သစ္စာမဖေါက်ပါ သမိုင်းမှာလည်းမရှိခဲ့ပါ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ မွတ်ဆလင်များကတော့ အရင်ကလည်းအမျိုးသားရေးကိုယ် သစ္စာမဖေါက်ခဲ့ သလို နောက်လည်းဘယ်တော့ မှ အမျိုးသားရေးကိုယ် သစ္စာမဖေါက်ပါဘူးလို့ မြန်မာ မွတ်ဆလင်လူငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်စာ ဂတိပေးပါတယ်။
ဒီအရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တပည်တော်တို့ မွတ်ဆလင်းများ မပါဝင်နိုင်တာကိုယ် နားလည်ပေးစေချင်တယ်…….
တပည့်တော်အမိုက်လေးမို့ အမှားရှိက ၀န်ဒါမိပါ ဦးဇင်……
September 2, 2012 at 1:41 pm | Reply
My brother Maungmaung Skw wrote:::
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက ဘာသာရေးနဲ့နွယ်လို့ လက်ရှောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရား-ဦးဇင်းကို ကြောက်နေကြလို့ပါဘုရား-ဦးဇင်းဟာ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ချစ်ကြည်ရေးတွေလုပ်နေတာတော့ မြင်ပါရဲ့တွေ့ပါရဲ့ဘုရား-ဒါပေမဲ့ ဦးဇင်းရဲ့ တရားတွေနာကြည့်တဲ့အခါ-ဦးဇင်းရဲ့ onl
ine စာမျက်နှာတွေ သဘောထားကြေငြာချက်တွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ဘာသာဝင်များအပေါ် တဘက်သတ်စွတ်စွဲမှုတွေနဲ့ မကောင်းမြင်နေတဲ့အချက်တွေကို သိနေတဲ့အတွ
က် ဦးဇင်းကိုကြောက်နေကြတာပါ။အခုတောင် မြို့ထဲမှာ-ဦးဇင်းခေါင်းဆောင်ပြီးဆန္ဒပြမဲ့သတင်းကြားရပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဘက်မျှားဦးလှည့်လာမှာကိုတွေးကြောက်ပြီး ဆန်ဝယ်ထားတဲ့မိသားစုတို့ သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ ကလေးတွေကို လုံခြုံမယ်ထင်တဲ့နေရာပို့ဖို့စီစဉ်တဲ့သတင်းတွေ ကြားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့် ဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်လို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက လက်ရှောင်တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရား-ဆရာတော်ဦးဝီရသူကို ကြောက်လို့ လက်ရှောင်နေတာပါလို့ မဝံ့မရဲ လျှောက်တင်ပါရစေဘုရား။
September 2, 2012 at 1:46 pm | Reply
မန္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်းနာယက ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ- ဘွဲ့ခံ ဝီရသူ (မစိုးရိမ်) ဟာ သမ္မတ ထောက်ခံပွဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးကို သုံးပြီး မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ရေး လှုံ့ ဆော်ပွဲကို ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ တရားဝင်ဦးဆောင်ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ခေါင်းစီးက ရိုဟင်ဂျာများကို ဒုက္ခသည်စခန်းများကို ပို့၊ တတိယနိုင်ငံများသို့ မောင်းထုတ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးပါ။ ဒါဟာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံး ယူအင် ကိုယ်စားလှယ်ကို ပြောခဲ့တဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးကို ဦးသိန်းစိန်ပြောမိလိုက်လို့- ဦးသိန်းစိန် ကို ရိုဟင်ဂျာ မျိုးပြုတ်သတ်ဖြတ်မှုကို ဦးဆောင်သူ၊ သို့မဟုတ် သမ္မတကိုယ်တိုင်က အားပေးအား မြှောက် ပြုသူ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး- ကမ္ဘာက သူ့ကို မျိုးပြုတ်သတ်ဖြတ်မှု တရားခံအဖြစ် ခုံရုံးကို တင်တော့မယ့် အချိန်မှာ- သူရိပ်မိသွားပြီး မသိမသာ နောက်ဆုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတို့ကလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ ဦးဆောင်လိုသူ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး သမ္မတ ကို အမှုပတ်သက်မှု မသိမသာ တိမ်စေခဲ့တယ်။
ကျောက်ဆည်မြို့မှာ မွတ်ဆလင် ဗုဒ္ဓဘာသာအဓိကရုန်းကို စတင်မီးမွှေးခဲ့တဲ့ ၀ိရသူ ဟာ ကျောက် ဆည်မြို့က မွတ်ဆလင်မိသားစုကို မီးရှို့သတ်ရာမှာ ဦးဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ အခုအချိန် ရိုးသားတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အသိတရားထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ = မွတ်ဆလင်များလို့ မြင်ထားတာကို ရောကြိတ်ပြီး ၀ိရသူ တစ်ဦး မွတ်ဆလင်တွေကို မောင်းထုတ်ဘို့ ဆက်လက်ကြံစည်ပြန်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ သမ္မတရဲ့ ပြောစကားတစ်ခွန်းကို ထောက်ခံတယ်လို့ အကြောင်းပြပြီး မွတ်ဆလင်များကို ဆက်လက် နှိပ်ကွပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း- သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် http://www.facebook.com/ven.wirathumsy မှာဆန္ဒပြပွဲ နောက်ခံ အဖြစ် သူကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်တင်ထားတ့ ဂျီဟာ့ဒ် ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကို တင်ပြထားတယ်။
တစ်ကယ်လို့ သူဟာ ရိုဟင်ဂျာ များကိုသာ လူမျိုးရေးအရ ဦးတည်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင် မွတ်ဆလင် များ အားလုံးကို ရည်ရွယ်တဲ့ ဂျီဟာ့ဒ် ဆိုတာကို တင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ သူဆိုလိုတာက မွတ် ဆလင်တွေဟာ ဂျီဟာ့ဒ်ခေါ် သာသနာပြုစစ်ဆင်နွဲပြီး အတင်းသာသနာပြုနေသယောင်၊ ဒါကြောင့် မွတ်ဆလင် ဂျီဟာ့ဒ်တွေ မြန်မာပြည်ထဲကို ၀င်မလာလေအောင် မွတ်ဆလင်များကို တော်လှန်တိုက် ခိုက် ပစ်ရမယ့် သဘောများကို ဦးတည်တင်ပြထားပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ကို အကြောင်းပြပြီး မွတ်ဆလင် အားလုံးကို နှိပ်ကွပ်တော့မယ် ဆိုတာ ထင်ရှားလှပါတယ်။
၀ိရသူ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်ဆလင်တွေဟာ သမိုင်းစဉ်ဆက် သူ့ဖွင့်ဆိုသလို ဂျီဟာ့ဒ် လုပ်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင် သိနေပါတယ်။ အလားတူ နောက်ထပ်လည်း သူဖွင့်ဆိုတဲ့ ဂျီဟာ့ဒ်မျိုး လုပ်ရန် အကြောင်းမရှိကြောင်း သူကိုယ်တိုင် သိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတစ်ကာမှာ ဖြစ်ပျက် နေတဲ့ ကိစ္စရပ်များ သို့မဟုတ် အစ္စလာမ့် ဆန့်ကျင်ရေး အုပ်စုများရဲ့ ၀ါဒဖြန့် တဲ့ စာပေတွေကို ဒိုင်ခံ တာဝန်ယူပြီး ဘာသာပြန်ပေးကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ မွတ်ဆလင်များကို တမင်ရည်ရွယ် တိုက်ခိုက် လိုကြောင်း သိသာလှပါတယ်။ ဘုန်းကြီး လုပ်နေပြီး ဘုန်းကြီး ၀ိနည်းနဲ့ မညီ- လူသားတွေကို မျိုးပြုတ် သုတ်သင် မောင်းထုတ်ဘို့ကိုသာ အစဉ်ကြံစည်နေသူ ဖြစ်တော့တယ်။
နိုင်ငံတစ်ကာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိစ္စများကို အကြောင်းပြပြီး အပြစ်မယ့် မြန်မာပြည်က မွတ်ဆလင် တွေကို သုတ်သင်မောင်းထုတ်ဘို့ လုံ့လပြုနေခြင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီး တစ်ဦးရဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါများ ဖြစ်ပါသလား—။ လို့ မေးခွန်းထုတ်စရာလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ဘုန်းကြီးတစ်ဦးက ဒီလူတွေကို မောင်းထုတ် လို့ ပြောတဲ့ စကားဟာ “ဒီလူတွေကို သုတ်သင်ရှင်းလင်း ပစ်” လို့ လူထုက နားလည်တဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ အပြောတစ်မျိုး- အလုပ်တစ်မျိုး လက်တွေ့ သရုပ် ဆောင်ပြနေတဲ့ မေတ္တာရှင် ဘုန်းကြီးများ အကြောင်းကို ကမ္ဘာကလည်း ရွံရှာနေပါပြီ။
သူ့လုပ်ရပ်များ၊ သူ့ကို ထောက်ခံအားပေးသူများရဲ့ လှုပ်ရှားမှု မှန်သမျှကို ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်နေစေ ဘို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း လုပ်ဆောင်သွားရမှာပါ။
သူ့လုပ်ရပ်များ အတွက် အစီအစဉ်များက—-။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှာ တော်လှန်ရေး လုပ်နေတဲ့ အုပ်စုတွေက ၀ါဒဖြန့်မှုများကို မြန်မာပြည် ထဲကို
ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်တို့၌ ၂.၉.၂၀၁၂-ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တို့၌ ၃.၉.၂၀၁၂-ရက်(တနင်္လာနေ့)
အမရပူရမြို့နယ်၊ ၄.၉.၂၀၁၂-ရက်(အင်္ဂါနေ့)တို့မှာ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်အရေးအခင်းနဲ့ပတ်သက်၍ သမ္မတကြီး၏ ရပ်တည်ချက်ကို ထောက်ခံပြီး မစ္စတာ ကင်တားနားကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည့်ပွဲဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီများသည် တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ကြောင်း ကမ္ဘာကြီးသိစေရန်။
ဘင်္ဂလီများ၏ အကြမ်းဖက်မှုကို မြန်မာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသားအားလုံးက ရှုတ်ချကြောင်း ကမ္ဘာကြီးသိစေရန်။
ရခိုင်တံခါးနှင့် ရခိုင်ပြည်သူလုံခြုံရေးကို အစိုးရအစဉ်အဆက် အလေးနက်ထားနိုင်ရန်။
အမှတ်(၁) ဗီနိုင်းမှာ သမ္မတကြီးပုံနှင့် ကင်တားနားပုံတို့ပါဝင်ပြီး၊ သမ္မတကြီးပုံကို အမှန်ခြစ်ကာ ကင်တားနား ပုံကို ကြက်ခြေခတ်ထားပြီး၊ “သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံခြင်းဖြင့် အမိမြန်မာပြည်ကို ကယ်တင်ပါ”။-စာတန်းပါဝင်သည်။
အမှတ်(၂) ဗီနိုင်း၌ သမ္မတကြီးနှင့် ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး မစ္စတာအန်တိုနီယိုတို့ပုံကို နောက်ခံ ထားကာ သမ္မတကြီး စကားသုံးခွန်းကို စာတန်းထိုးထားသည်။
၁။ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ခိုးဝင်လာသူများသည် နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပါ ခြိမ်းခြောက်လာ။
၂။ ရိုဟင်ဂျာများကို UNHCR-သို့ အပ်နှံပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းအဖြစ် ထားရှိမည်။
၃။ တတိယနိုင်ငံများက လက်ခံမည်ဆိုလျှင် ပို့ပေးမည်။
ဤဗီနိုင်းနှစ်ခုကိုသာ ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုပြီး လက်ကိုင်ဆိုင်းဘုတ်စာသား (၁၅)ခုကို ပိတ်ပင်လိုက်ကြသည်။
ဆန္ဒပြချိန်ကိုလည်း ၂-နာရီမှ ၁-နာရီလျှော့ချကာ စုရပ်များ၊ ပစ်မှတ်များ၊ လမ်းများကိုလည်း ပြောင်းရွေ့ သတ်မှတ်ပေးကြပြန်သည်။
“၂.၉.၂၀၁၂-ရက် ဝါခေါင်လဆုပ်(၁) တနင်္ဂနွေနေ့မြို့နယ်နှင့် အချိန်ဇယား”
မွန်းတည့် (၁၂)နာရီ လူစု။
၃၃-လမ်းမှ ၇၉-လမ်းအတိုင်း ၂၆-ဘီလမ်းထိပ်မှာဆုံး။
လမ်း ၈၀-မှ ၃၅-လမ်းအတိုင်း ၈၄-လမ်းအထိ။
၈၄-လမ်းအတိုင်း ၃၅-မှ-၃၉-လမ်းထောင့် ပေါင်းလဲတိုက်အထိ။
၁၂×၈၀-လမ်း၊ ကျုံးအနောက်မြောက်ထောင့် စုရပ်၊ ညနေ(၄)နာရီ စတင်လှည့်လည်။
ကျုံးအနောက်ဘက် လမ်း ၈၀-အတိုင်း တောင်ဘက်သို့ချီ။
၁၉-လမ်းရောက်လျှင် အနောက်ဘက်ကွေ့၊ ၈၆-လမ်း ညောင်ပင်ဈေးအထိ ချီတက်။
ညောင်ပင်ဈေးမှ ၁၂-လမ်းမှာ ပြီးဆုံး။
(စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် တစ်နာရီတိတိသာ)
ဤဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲသို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုသူ၊ ကူညီဆောင်ရွက်လိုသူ၊ လှူဒါန်းကျွေးမွေးလိုသူ မည်သူမဆို ဘာသာလူမျိုး မခွဲခြားပဲ ပါဝင်၊ ကူညီ၊ လှူဒါန်းခွင့်ရှိကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။
တွေ ဖြစ်ပါတယ်။–၊ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကျူးကျော်သူတွေ ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာက သိစေဘို့ ထ အော်မယ် ဆိုတဲ့ ကလေးကလား စကားကို ကမ္ဘာက ဘယ်လို ယုံကြည်မလဲ။ ရိုဟင်ဂျာများ နှိပ်ကွပ်ခံနေရတာကိုသာ ကမ္ဘာက လက်တွေ့ သိနေပါတယ်– ၀ိရသူ၊ ဆိုတာ သင်္ကန်းဝတ် ၀ိရသူ တစ်ယောက် သိစေရမှာပါ။
September 2, 2012 at 1:57 pm | Reply
ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုလားတာက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဖြစ်နိုင်တယ်လေ၊ မူဆလင်မ်တွေထဲမှာ ရှိနိုင်တယ်။ အကြမ်းဖက်သမားတွေတို့ အစွန်းရောက်သမားတွေပေါ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာလည်း ရှိနိုင်တယ်။ အဲဒါတွေ ပြည်သူလူထုလည်းမဟုတ်ဘူး၊ သံဃာထုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်၊ ငြိမ်းချမ်း
သွားလို့ရှိရင်၊ စည်းလုံးသွားလို့ရှိရင် ကိုင်တွယ်ရမှာ ခက်တယ်လို့ ယူဆထားတဲ့ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လူတွေပေါ့။ အဲဒီမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့် ဦးဇင်းတို့ကအများကြီး အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျော်ပါတယ်။ ဒီလို အခက်အခဲလေးတွေနဲ့ကြုံရတာ အင်မတန် ပျော်ပါတယ်။ ဒါလေးက အမှတ်တရ ဖြစ်သွားတာပေါ့။
၁၂-၂-၂၀၁၂ ဈေးချိုဟော်တယ်တွင် ပြုလုပ်သော ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းပွဲ ပျက်သွားရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရှင်ဦးဝီရသူ မှ မီဒီယာများသို့ မိန့်ကြားခဲ့သော စကားများ အနက် တချို့ …
September 2, 2012 at 1:59 pm | Reply
I hereby wish to apologize my Buddhist friends for my attack on this monk U Wira Thu.
1. Please kindly try to understand and accept that I am not attacking Buddhism or any other monks or Sayardaws.
2. If U Wira Thu just practices Buddha’s teachings, we all would give utmost respect.
3. Now he decided to come down to the Political Arena and the politics could be messy and sometimes dirty.
t U Wira Thu is worse than doing normal politics and is playing DIRTY POLITICS by mixing racial and religious issues with politics.
5. And he is attacking not only Rohingyas but Islam and Christians.
6. Now he had indirectly attacking Daw Aung San Suu Kyi
7. And U Wira Thu is trying to twist the hands of our beloved President U Thein Sein to retract the latest policy of accepting the Rohingyas under the Bengali name and advocating their Human Rights including rights of citizenship, promise of issuing the National Registration Cards and the promise to provide proper education for them.
September 2, 2012 at 2:01 pm | Reply
My comments in English in response to the Golden Eagle’s postings in Myanmar language.
ဆရာတော် အရှင်ဝီရသူမှ ၂၉.၈.၂၀၁၂ရက်နေ့၊ ည၇နာရီမှ ၉၃၀အထိ မဟာသကျသီဟဘုရားအတွင်း
မကြောက်တရားဟောကြားခဲ့ (If there is no shyness and no afraidness human would do what ever they desire and commit all the sins and crimes! He is not afraid of HELL? Sansara? Government? Communal Riots? Killing of Muslims?)
ို ကြောက်စရာမလိုဘူး (If do not afraid or scare the Dhamma, you may dare to commit sins.)
အဓမ္မကို သာကြောက်ရမှာ (But he is promoting Adhamma)
ကောင်းတာလုပ်တာကို မကြောက်နဲ့ (Just do what is good for you and don’t care for others?)
မကောင်းတာလုပ်တာကို ကြောက် (You are doing all the wrong things by spreading HATRED on Christians, Muslims and Rohingyas. You were the mastermind behind Kyauk Sae Riots where dozens of Muslims were killed, includingapregnant woman and children. You keep on spreading lies.)
လက်ထိပ်ကို မကြောက်နဲ့ (All the good or normal citizens or even most of the criminals are scared of handcuffs but only some hardcore criminals are immune to it)
ကိုယ်နဲ့မထိုက်တန်ဘဲရတဲ့ ဘွဲ့တံဆိပ်ကို ကြောက်(Are you referring to DASSK? Or U Thein Sein?)
ထောင်ကို မကြောက်နဲ့(All the good or normal citizens or even most of the criminals are scared of the jail but only some hardcore criminals are immune to it)
အမှောင်ကိုကြောက် (Natural darkness is nothing to be afraid of but darkness of heart with hatred, anger and revenge is scarry)
ရန်အောင်ဖို့ဆိုရင် (Which enemy?)
အချိန်အခါကောင်းချက်ကောင်းကို စောင့် (You are calculative and vindictive, quite dangerous.)
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဒီအချိန်မှာ ပြည်သူများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ စုပေါင်းပြီး သမ္မတကြီးဘတ်ကရပ်တည်ကြဖို့ ဟောကြားခဲ့ပါတယ် (Rohingya never say that they are Bama but undeniably they are citizens of Myanmar. Even the President U Thein Sein had agreed to accept all of them under the name of Bengali. Please read his latest views in VOA Interview. Don’t twist the facts and words. I hope you could understand the interview in Burmese/Myanmar language.)
September 2, 2012 at 2:02 pm | Reply
During the previous religious riots, government practiced the lackasidal attitude at first because they thought the demonstrators were just supporting the government and riots s
pread out of control later.
U Wairathu is attacking the Christians and Muslims in his Face Book postings. And because there is also an ongoing Anti-Chinese propaganda spreading in Mandalay, people are worried” one Mandalayan told myanmarmuslim.net.
September 2, 2012 at 2:04 pm | Reply
(၂) သင်တို့အထက်က ဘိုးဘေးဘီဘင် အစဉ်အဆက်လာ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုလည်း အဆုံးသတ် အားကိုးပြီး အဟုတ်မှတ်
၍ မကျင့်သုံးကြကုန်နှင့် (Just do not rely on what written and said by Rakhine histories and stories)
(၆) အခြားအခြားသောလူတို့ အခြားအခြားသော အယူဝါဒတို့ထံမှ ပုံတူကူး၍ ကျင့်သုံးခြင်းသည်လည်း မိမိတို့ ဘဝနှင့် အပ်စပ်လိမ့်မည်ဟု အတည်တကျ မယူကြကုန်နှင့်။ (Dr Aye Maung suggestion to copy the Israel’s methods)
September 2, 2012 at 2:06 pm | Reply
“One Patron Abbot said that the Buddhism was recognized as the National Religion i
n 1962, so it is now already 52 years and we now started this Theravada network to promote the propagation and stability of Buddhism.”
Union of Myanmar had never recognized the Buddhism as the National religion. Instead, just accepted or recognized that the majority citizens are worshipping the Buddhism.
Previous Government of U Nu’s trying to establish Buddhism as National Religion resulted in the Ethnic Minorities’ historical armed rebellions in Burma/Myanmar.
“During the present Democracy Transformation period, the religious extremists are trying to use the Nationalism forcing the government to confuse the religion with politics…
September 2, 2012 at 2:07 pm | Reply
As there arealot of misunderstandings, hate speeches by hate mongers in Myanmar who are trying to stir up the Anti-Muslim sentiment disguised asaNationalist spirit to protect the race and religion. They are pretending that they are supporting the present government and even trying to confuse the government and public by using Anti-Muslim activities to mix
up religion and politics. Actually, Muslims are just made as sacrificial lambs and Islamophobia is just as used as sugar coated disguises to camouflage or smoke shield their ultimate aim to sabotage and overthrow the present government.
It is time for all the Muslims in Myanmar to show our heartfelt support to our beloved President U Thein Sein led Myanmar Government, Myanmar Tatmadaw and especially our President U Thein Sein’s latest policy revealed during the interview on VOA.
We need to advertize or made known our full support on our President, government and Tatmadaw by wearing T-Shirts printed with our Myanmar National Flags and President’s picture with our supporting words on them.
1. To easily give or issue National Registration Cards for ALL Muslims in Myanmar.
2. To stop Hate speeches and Hate Mongers trying to stir up emotions against Muslims.
3. We need to add our wish at the end “For Peace, stability and progress for the whole Myanmar.”
Muslims in Myanmars should put up the signposts, vinyl sheets, in front of Mosques, houses, Road side sign boards etc. in addition to paid advertisements in Journals, newspapers.
September 2, 2012 at 2:09 pm | Reply
Be careful U Thein Sein, ex and Present Generals…You all would be held responsible IF any untoward harm on Muslims in Myanmar. You ALL could be pulled to ICC for this if you allow those Xenophobic bigots to continue with the plan for ETHNIC CLEANSING.
MY GOOD FARSIGHTED FRIEND WROTE>>>ဒီနေ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူတွေထဲမှာ စစ်အာဏာကို ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားလိုသူတွေရဲ့ မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်က တိုင်းပြည်မတည် မငြိမ်ဖြစ်နေဖို့၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အကွဲကွဲ အပြားပြား ဖြစ်နေဖို့၊ တပ်မတော်ကို လူထုက တော
င့်တလာဖို့၊ နောက်ဆုံး လက်ရှိဖွဲ့စည
်းပုံကို မပြင်ဘဲ စစ်တပ်က အာဏာဆက်ရှိနေစေဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက် သူ့မှာ ရန်သူဆိုတာက သူ့အစီအစဉ်ကို ပျက်အောင် လုပ်မဲ့သူသာဖြစ်တယ်။ သူအသုံးချလို့ ရမဲ့သူဆိုရင် ဦးဝီရသူဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လို ရန်သူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် သူအားပေးနေမှာဘဲ။ အလွန်အကျွံဖြစ်ပြီး သူ့ကို ပြန်ထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်မှ ဦးဝီရသူတို့ ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ကို ချကျွေးမှာဖြစ်တယ်။ ဒီကြောင့် ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အစိုးရက အရေးယူမယ်ဆိုတာကို ထည့်မတွက်ထားစေချင်ဘူး။ ဆန္ဒပြဖို့ ခွင့်ပြုချက်ယူရတယ်။ အင်အယ်လ်ဒီကို ဆန္ဒပြဖို့ ခွင့်ပြုချက် ယူစရာမလိုဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အခုလဲ မြို့နယ်အားလုံးမှာ တစ်ပြိုင်နက်လုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ နောက် ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာက ဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာကော၊ ဘုန်းကြီး လူထု ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လူမိုက်အုပ်စု အားလုံး လွှမ်းမိုးနေတာမို့ သူတို့လုပ်ချင်တာကို ဖန်တီးနိုင်တယ်။ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ သာဓကတွေလည်း ကျနော်တို့ ခံခဲ့ရတာမို့ ကျနော်တို့ အသိဆုံးဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် မန္တလေးက မွတ်စလင် ဒေသခံတွေက ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေ၊ သတိပေးတာတွေကို အခုကတည်းက တိုင်ပင်သင့်ပြီ။ ဥပမာ အသေးအဖွဲ ရန်ဖြစ်မှု၊ ရာဇဝတ်မှုကနေပြီး အဲဒီလူအုပ်ကို ဆွပေးလာတာမျိုးအထိ ကြိုပြင်ထားမယ်ဆိုရင် မတားနိုင်ရင်တောင် အထိအခိုက် အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မယ်။ သတိဆိုတာ ပိုတယ် မရှိပါဘူး။
September 2, 2012 at 2:11 pm | Reply
“The ink of the scholar is more valuable than the blood of the Martyr.” [Prophet Mohammad (Peace be upon him)]
If we discriminate others as foreign because they, their race and religion are different to us, all the others could also look down and
discriminate on us because we are also foreign to them!
ကိုယ်ငွေကိုယ်သုံး ကိုယ်အလုပ်အကိုင်အပျက်ခံပြီး အီမာန်နဲ့လုပ်နေကြတယ်။
ခင်ဗျားတို့မှာ ဘင်္ဂါလီနဲ့ရိုဟင်ဂျာ အသိုင်းအဝိုင်းဘဲရှိတာ-
အဲ့ဒီထဲမှာ ပြသနာရှာလိုသူတွေရှိသလို အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်စေလို နေစေလိုတဲ့သူတွေရှိတယ်။အလယ်အလတ်သမားတွေရှိတယ်-ဘာမှစိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေရှိတယ်-ကိုယ်ဘက်မှာလဲ ဒီအတိုင်းဘဲရှိတယ်။နိုင်ငံမှာကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးက မပီပြင်ဘူး။ဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိပေမဲ့ ဥပဒေအောက်မှာပြည်သူတွေဘဲရှိတယ်။ဥပဒေနဲ့အတူ ဥပဒေအတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့သူမရှိဘူး။ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးမီးတွေကြားသားယူမယားယူကိစ္စတွေကဖြစ်ဖြစ်လာတယ်-
September 3, 2012 at 4:16 am | Reply
By Cem Ozturk@ http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/EJ21Ae01.html